“Inaad Harry Kane u dhiibto qaadista KOORNOOYINKA waa adigoo waydiiyay Lewis Hamilton inuu TAAYARADA ka badelo buubuurkiisa,”. Alan Shearer – Gool FM
Byare June 16, 2016
(France) 16 Juunyo 2016. Waxaa socota weli dooda ku aadan sheekadii laga dhexlay kulankii England ee furitaanka Euro 2016 ay la yeesheen xulka Ruushka oo bar-baraha ku idlaaday kaddib markii la arkay dhaliyaha Tottenham Harry Kane oo koornooyinka u soo qaadaya xulka saddexda libaax.
Rugcadaagii hore ee xulka England Alan Shearer ayaa aad uga biyo diiday arrinkan isagoona ku tusaaleeyay sheekadan ah inaad Koornooyinka u dhiibto Kane ay la mid tahay adigoo Lewis Hamilton ee caanka ku ah tartanka Baabuurta ku tiri isla adiga uun badelo TAAYARADA babuurkaaga.
“Kane waa No.1 weerarka dhexe iyo mid ka mid ah xiddigaheena ugu fiican ee kubbadaha madaxa,” Alan Shearer ayaa sidaa yiri.
“Sidaa darteed maxay tahay sababta uu Roy Hodgson u waydiisanayo inuu koornooyinka soo tuuro? Waxay la mid tahay sida adigoo Lewis Hamilton waydiinaya inuu Taayaradiisa baabuurka badesho.
“Kane wuxuu leeyahay xuquuqda inuu ku yiraahdo Hodgson, ‘U maleyn maayo inaan qaadi doono koornooyinka, waxaan doonayaa inaan ku dhex jiro diilinta ganaxa si aan dhammaadka kubbadahaas u helo.
“Ma ahan inuu ku qeyliyo tababarihiisa ama uu caro u muujiyo, laakiin iminka isagu waa nin wayn oo dhiiban kara fikirkiisa.
“Taasi waa waxaan sameyn lahaa haddii uu tababare I waydiisan lahaa inaan soo tuuro koornooyinka marka aan ciyaarayo.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa ay yiraahdeen Ray Lewington iyo Gary Neville markii uu Roy u sheegay iyaga inuu waajibaadka Koornooyinka u dhiibayao Kane.”.
Sikastaba, tababaraha xulka England ayaa ku adkeesanaya go’aankiisa inuu Koornooyinka u dhiibo Kane isagoona u arka kan ugu fiican ee kubbad keenista.
"Mar walba shaqo', Jose Mourinho oo Instagram-kiisa soo dhigay sawir fasiraad badan bixinaya!